Ma leedahay istaraatiijiyad ganacsi oo shaqsiyeed? | vfxAlert official blog
Ma leedahay istaraatiijiyad ganacsi oo shaqsiyeed?
Dhammaan koorsooyinka tababarka wanaagsan iyo buugaagta ku saabsan ganacsiga had iyo jeer waxay yiraahdaan waxa ugu muhiimsan waa sida loo sameeyo ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikiyaawankeesdi ikhtiyaar leh ikhtiyaar lagu helo dhaqaaqa Elliott ah, laakiin inaad yeelato istiraatiijiyad ganacsi oo kuu gaar ah , edbinta iyo xeerarka maaraynta halista.
Taladan oo dhami waxay noqoneysaa caajis. Bilowgu uma baahna inay waqti ku lumiyaan markaad internetka ku dhex gasho weydiinta " calaamadaha ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah " oo aad bilaabi karto kasbashada. Oo kaliya oo leh deebaajiga ugu horreeya ee lumay, waxay fahmeen in istiraatiijiyaddu u baahan tahay in si faahfaahsan loo tijaabiyo, naftaada u hagaajiso, si taxaddar leh u akhri sharaxaadda iyo xeerarka macaamil ganacsi.
Xitaa markii loo baahdo istaraatiijiyad ganacsi oo shakhsiyadeed shaki kuma jiro ganacsatadu waxay leeyihiin diidmo caadi ah ...
Aqoon uma lihi inaan sameeyo istiraatiijiyadeyda.
Diidmo wanaagsan? Waxaa soo baxday in aqrinta tirada suugaanta iyo tijaabinta istiraatiijiyado ganacsi, mararka qaarkood xitaa koonto dhab ah, aysan wax gabagabo ah oo waxtar leh bixin. Haddii tani aysan ahayn caajisnimada caadiga ah, markaa, maadaama aysan u muuqan mid weerar ah, waxaa habboon in laga fekero suurtagalnimada daraasad dheeraad ah oo ku saabsan xulashooyinka binary.
Akhrinta buugaagta heerarka Fibonacci, falanqaynta mowjadaha ee aqoonta kale ee aragtida ah ayaa si daciif ah ugu keenaya ganacsadaha fahamka dhabta ah ee suuqa. Kaliya isku darka horumarka dadka kale iyo fikradahooda ayaa u horseedi kara guul dhab ah. Isku day calaamadaha ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah wax walbana hubaal way shaqeyn doonaan.
Akhrinta buugaagta oo leh sababo xariif ah oo ku saabsan tirooyinka Fibonacci, falanqaynta mowjadaha ee xikmadaha kale ee aragti ahaaneed oo aad u yar ayaa ganacsadaha ugu dhawaanaya fahamka dhabta ah ee suuqa. Kaliya isku darka horumarka dadka kale iyo fikradahooda ayaa u horseedi kara guul dhab ah. Isku day calaamadaha ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah wax walbana hubaal way shaqeyn doonaan.
Waqti looma laha istiraatiijiyadda iyo falanqaynta sida calaamadaha u u shaqeeyaan ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ah.
Oo meeye waqtiga la ganacsado? Ganacsi ahaan, maalinta shaqadu ma laha xuduudo oo haddii qaab nololeedka uusan si wanaagsan u habaysnayn, way ku adkaan doontaa ganacsadaha. Faa'iidadu waxay u baahan tahay kormeer joogto ah iyo falanqeyn, waqti istiraatiijiyad waa in marwalba la helaa.
Sikastaba ma qaban karo.
Ma shaqeynayso haddii aadan bilaabin. Wax walba waxay dhacaan markii ugu horeysay. Haddii isla markiiba la helin isku dayga xiga oo daruuri waxay noqon doontaa mid wax ku ool ah.
Diyaar uma ahan aqbalida qasaaraha.
Dhibaatadani way ka badan tahay wixii hore oo dhan. Ganacsato badan ayaa leh, iyagu waa kuwa daabaca dib u eegista iyo fagaarayaasha ku saabsan «xumaanta» dillaaliinta iyo istiraatiijiyadda.
Laakiin waxay la hadlaysaa fulaynimo. Way fududahay in la aqoonsado ganacsatadan - waxay si joogto ah u bartaan shabakadaha lacag bixinta iyo bilaashka ah, waxay iibsadaan “farsamooyinka qoraaga”, iwm. Waa iyaga kuwa sameeya khiyaanooyinka wax u dhimaya suuqa Forex iyo fursadaha.
Muuqaal kale oo sifo gaar ah u leh ganacsadaha ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah u leh ayaa ah ugu yaraan 10 tilmaamayaal midabyo kala duwan leh inay isla waqtigaas furan yihiin, quudinta wararka ayaa socda oo kanaalka TV-ga ayaa si joogto ah u tabinaya, halkaas oo "khubaro" ka hadlayaan. Mana jiro ganacsi, 2-3 ikhtiyaar bishiiba oo leh faa iidada ugu yar.
Ha dhagaysan dadka sidaas oo kale ah. Suuqa si joogto ah ayuu isu beddelayaa, fikradaha iyo istiraatiijiyaddu waxay u baahan yihiin dib-u-eegis joogto ah iyo hagaajin. Go'aanso naftaada-guuleysta ganacsatada faa'iido ahaan soddon sano ka hor celcelis ahaan celceliska dhaqaaqa waxba ha ka murgin, oo sii wad inaad sidaas sameyso.
Istaraatiijiyad kasta oo shaqeysa way joogsataa.
Waa sax. Suuqa iyo dhaqaaluhu si isdaba joog ah ayey isu beddelayaan istiraatiijiyadduna shaqada ayey joojin doontaa. Waxaad ubaahantahay inaad hagaajiso ama raadsato fikrado cusub. Waqtiga shaqada ee yarna wuu sii yaraanayaa, badanaa waa in la sameeyaa.
Had iyo jeer waxay kuxirantahay yoolalkaaga shakhsi ahaaneed iyo rabitaankaaga inaad barato sida lacag looga sameeyo ikhtiyaaraadka ikhtiyaariga ah . Haddii ganacsade doonayo inuu noqdo xirfadle oo uu ku guuleysto wixii shaki ah, cabsi, caajisnimo iyo khuraafaad ah waa inuu ka tagaa "waagii hore". Ku shaqaynta lacagtu ma oggola tan, gaar ahaan lacagta dadka kale.